IFirefox 93 ekugqibeleni isebenze inkxaso kwifomathi ye-AVIF | Ubunlog
IFirefox 93 ekugqibeleni isebenze inkxaso kwifomathi ye-AVIF kwaye iphucule umbukeli wePDF kwakhona
Kwaye "isivuno ekugqibeleni sifikile" ndacinga xa ndibona i uluhlu lweendaba de Firefox 93. Kwaye iMozilla isebenzise inkxaso yefomathi yomfanekiso we-AVIF kuhlobo lwe-beta yesikhangeli sayo kwiinguqulelo ezininzi, kodwa bayikhupha ngaphambi kokumiselwa kwesitali ngoba ingxaki ibivele ivele. Ngamanye amaxesha kuba babecinga ukuba ayizalisekiswanga ngokupheleleyo, ngamanye amaxesha ngenxa yokuhlehla ... kodwa sele ilapha.
I-AVIF, okanye iAV1 Image Format, yifomathi yokugcina imifanekiso okanye ukulandelelana kwemifanekiso icinezelwe ngeAV1 kwifomathi yeHEIF. Phakathi kwezibonelelo zayo sinoxinzelelo ngaphandle kokulahleka komgangatho. Ukongeza kwinkxaso ye-AVIF, iFirefox 93 iza nezinye iindaba, kodwa akukho namnye obalaseleyo njengalo kuba kudala simlindile.
1 Yintoni entsha kwiFirefox 93
2 Ngoku iyafumaneka kwiwebhusayithi yakho
Yintoni entsha kwiFirefox 93
Inkxaso yefomathi entsha yomfanekiso we-AVIF, esekwe kwi-codec ye-AV1 yanamhlanje, yasimahla. Inika ukonga okubonakalayo komda wokuhamba kweesayithi ngokuthelekiswa neefomathi zemifanekiso esele zikho. Ikwaxhasa elubala kunye nezinye izinto eziphambili.
Umbonisi wePDF ngoku uxhasa ukugcwaliswa kweefom ezingaphezulu (iifom ezisekwe kwiXFA, ezisetyenziswa ngoorhulumente kunye neebhanki ezahlukeneyo).
Xa imemori yenkqubo ekhoyo iphantsi kakhulu, iFirefox kwiWindows iya kukhuphela ngokuzenzekelayo iithebhu ngokusekwe kwixesha lokugqibela lokufikelela, ukusetyenziswa kwememori kunye nolunye uphawu. Oku kuya kunceda ukunciphisa ukungqubana kweFirefox ngenxa yokuphuma kwimemori. Ukutshintshela kwithebhu ekhutshelweyo ngokuzenzekelayo kuyilayisha kwakhona.
Ukuthintela ukulahleka kweseshoni yabasebenzisi beMacOS abasebenzisa iFirefox kwifayile ye-.dmg, ngoku baya kuyalelwa ukuba bagqibe ukufakela. Esi saziso semvume sibonakala okokuqala xa aba basebenzisi beFirefox kwikhompyuter yabo.
Ukhuphelo oluxhomekeke kunxibelelwano olungakhuselekanga ngoku luthintelwe, kukhuselwa kukhuphelo olunokuba nobungozi okanye ukhuseleko.
Ukuphuculwa kokuhambelana kwewebhu kukhuseleko lwabucala ngeSmartBlock 3.0.
Ukwazisa ukhuseleko lomkhondo womthumeli omtsha kuKhuseleko lokuKhangela ngokuKhangela kunye nokuKhangela kwaBucala
Umfundi wesikrini seVoOOver ngoku uxela ngokuchanekileyo izinto eziphawulweyo kulawulo lomthi olufikelelekayo njengophawuliweyo okanye olungaphawulwanga.
Umfundi wescreen se-Orca ngoku usebenza ngokuchanekileyo ngeFirefox, kwaye akusafuneki ukuba abasebenzisi batshintshele kwesinye isicelo emva kokumiliselwa kwesikhangeli.
Ngoku iyafumaneka kwiwebhusayithi yakho
Firefox 93 ngoku iyafumaneka kusuka iwebhusayithi yabo Zonke iinkqubo ezixhaswayo. Ukusuka apho, abasebenzisi beLinux banokuzikhuphelela i-binaries, kwaye kungekudala iipakeji ezintsha ziya kuvela njengohlaziyo kulwabiwo olwahlukileyo lweLinux.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » IFirefox 93 ekugqibeleni isebenze inkxaso kwifomathi ye-AVIF kwaye iphucule umbukeli wePDF kwakhona
IiHero zoMandla kunye noMlingo II 0.9.8 ifika notshintsho olungaphezulu kwama-60 kunye nokulungiswa